नेपाली क्रान्तिको इतिहासले आज सबै सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू पुनः एकताबद्घ भएर अगाडि बढ्न जोडदार माग गरेको छ ।
-- मोहन वैद्य‘किरण’
माक्र्सवाद विश्वसर्वहारा वर्गको क्रान्ति र मुक्तिको विज्ञान हो । संशोधनवादले माक्र्सवादको तोडमोड र भ्रष्टीकरण गर्दछ ।
माक्र्सवादको विकाससितै संशोधनवाद पनि विकसित हँुदै आएको छ । आज एकातिर माक्र्सवादको माक्र्सवाद—लेनिनवाद—माओवादमा विकास भएको छ भने अर्कोतिर संशोधनवादको शास्त्रीय,आधुनिक तथा नवसंशोधनवाद हुँदै नवप्रतिक्रियावादमा पतन हुन पुगेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका साथै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको द्वन्द्ववादलाई बुझ्नका लागि विपरीतहरूको एकता र संघर्ष सम्बन्धी द्वन्द्ववादको आधारभूत नियमबारे केही कुरा गर्न आवश्यक छ । यो नियम समस्त प्रकृति, मानव समाज, चिन्तन र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि क्रियाशील हुन्छ । विपरीतहरूको एकता र संघर्षका दुई अवस्था हुन्छन् । पहिलो अवस्थामा विपरीतहरूबीच एकता र संघर्ष दुबै हुन्छन्, विपरीतहरू साथसाथै रहन्छन् र एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व हुँदैन । दोस्रो अवस्थामा ती विपरीतहरू एकअर्कोमा बदलिन्छन् । जस्तो कि माओ भन्नुहुन्छ ः “सबै परस्पर विपरीतहरू अन्तःसम्बधित हुन्छन्, र ती न केबल एक विशेष परिस्थतिमा एउटै एकाइमा सहअस्तित्वको स्थितिमा रहन्छन्, अपितु एक अन्य विशेष परिस्थतिमा एक अर्कोमा पनि बदलिन्छन् ।” (ग्रन्थ १, हिन्दी पृ.१०९ ।) हामीले विपरीतहरूको एकता र संघर्षका यी दुबै अवस्थालाई वाद–विवाद र सम्वाद वा एकता—संघर्ष र रूपान्तरणका अर्थमा पनि बुझ्नु पर्दछ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास माक्र्सवादी र संशोधनवादी धाराका बीचको भीषण संघर्षको इतिहास हो । यो इतिहास वाद, विवाद र संवादको द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाका बीचबाट विभिन्न चरण हुँदै अगाडि बढेको छ । यो प्रक्रियालाई मूलतः यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः २००६ सालदेखि २०३१ सालसम्म, २०३१ पश्चात् २०५१ सालसम्म, २०५२ देखि २०६९ सालसम्म र २०६९ देखि हालसम्म । यस प्रक्रियाका मूल विशेषताबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
२००६साल बैसाख १० अर्थात् २२ अप्रिल १९४९ मा नेपालमा क. पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र त्यसले एउटा महत्वपूर्ण पर्चा निकाल्यो । १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा पार्टीको पहिलो घोषणापत्र प्रकाशित भयो । त्यसमा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपालमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको पथप्रदर्शनमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरूद्ध लोकजनवादी अर्थात् जनताको जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने मान्यता प्रस्तुत गरियो । २००८ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा क. पुष्पलालको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम पारित गरियो । २००६ सालदेखि पहिलो महाधिवेशनसम्मको अवधि क्रान्तिकारी अवधि थियो र यो निकै शानदार तथा उपलब्धिमूलक रह्यो ।
२०३१ देखि २०५१ सम्मको यस प्रक्रियामा ३० को दशकमा विकसित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको सशक्त तथा प्रभावकारी धारालाई ४० को दशकको पूर्वाद्र्धमा पैदा भएका फुट तथा विचलनले निषेध ग¥यो । अनि त्यस पश्चात् विकसित एकीकरण र ध्रुवीकरणले त्यस प्रकारका फुट तथा विचलनलाई निषेध गरी अर्काे नयाँ संवादलाई जन्म दियो ।
यसै अवधिमा अन्य कम्युनिस्ट समूहहरूमा एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । नेकपा (एमाले) विभाजित बन्न पुग्यो । त्यो समूह एमाले र मालेमा विभक्त भयो । यस अवधिमा एमाले र मालेभित्रका कैयौं क्रान्तिकारीहरू नेकपा (माओवादी) मा एकीकृत हुनपुगे । यस अवधिमा पनि वाद–विवाद र सम्वादका विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढे ।
यो अत्यन्तै तीव्र एकीकरण र ध्रुवीकरणको अवधि हो । यसै क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न धारा तथा उपधाराका बीच वाद, विवाद र सम्वादका विभिन्न प्रक्रिया चल्दै आएका छन् । आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरु एकातिर र क्रान्तिकारीहरु अर्काेतिर भई संवादका रुपमा एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
यो बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलतः दुई धारा तथा ध्रुवमा खडा छ । आज एउटा ध्रुवमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि प्रथम महाधिवेशन पूर्वसम्मको क्रान्तिकारी परम्परा, क. पुष्पलालद्वारा २०२५ मा आयोजित तेस्रो सम्मेलन, २०२८ सालको ऐतिहासिक झापा विद्रोह तथा २०२८ को केन्द्रीय न्युक्लस हुँदै २०३१ मा आयोजित चौथो महाधिवेशन र २०५२–२०६२ सम्मको दशवर्षे जनयुद्ध सहितको क्रान्तिकारी धारा खडा छ । परन्तु यसको ठीक उल्टो २०१०– २०१९ सम्मको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी परम्परा, झापा विद्रोहबाट विचलित माले तथा एमालेका नकारात्मक प्रवृत्ति र पूर्व चौम तथा माओवादी आन्दोलनको अवसरवाद सम्मिलित भई अर्काे ध्रुव खडा भएको छ । आज यो धारा पश्चगमनको यात्रामा हिंडिरहेको छ । उक्त दुई धारा वा ध्रुवभन्दा पृथक् केही उपधारा पनि आज अस्तित्वशील रहेका छन् । तर तिनले लामो समयसम्म स्वतन्त्र वा तटस्थ हैसियत जोगाइराख्न सक्तैनन् ।
के नेपालमा साँच्चै पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई जनताको जनवाद स्थापित भएको छ त ? दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गको राज्यसत्ता र उनीहरूकै पुरानो राज्यमशिनरीलाई यथावतै कायम राखेर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई शिरोधार्य गरेर र नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक मुलुकमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप तथा प्रभुत्वलाई यथावत् स्विकारेर यहाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भई जनताको जनवाद स्थापित भएको कदापि ठहर्दैन । त्यस्तै, उनीहरू के तर्क पनि गर्दछन् भने कम्युनिस्ट वा वाम नेतृत्व रहेकोले उक्त क्रान्ति सम्पन्न भएको हो । के कम्युनिस्ट विचारधाराको परित्याग गरी प्रतिक्रियावादी वर्ग, राज्यसत्ता र व्यवस्थाको रक्षाकवच बनेका तत्वहरू कम्युनिस्ट वा वाम हुन सक्तछन् ? कदापि सक्तैनन् ।
संविधानमा समाजवाद राखिएकोमा उनीहरु निकै फुर्ती गर्दछन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “हाम्रो संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, राज्यलाई समाजवादन्मुख राज्यको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।” आखिर यो समाजवाद कस्तो हो त ? उनीहरु प्रतिवेदनमा भन्दछन्– “यतिबेला त्यो (प्रजातान्त्रिक समाजवाद–ले) नउवदारवादी पुँजीवादको एउटा अंगको रुपमा निकम्मा र अकर्मण्य बनेको छ । हाम्रो समाजवाद त्यस प्रकारको “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” होइन । दोस्रो, हाम्रो समाजवाद सोभियत संघ र त्यसलाई अन्धानुकरण गरेर आम रुपमा पूर्व समाजवादी देशहरूमा लागू गरिएको ‘सोभियत मोडेल’को समाजवाद पनि होइन । त्यसले कतिपय सकारात्मक पक्ष र योगदानका बाबजुद समाजवादलाई एकदलीय राज्यप्रणाली र निजी सम्पत्तिको औपचारिक उन्मूलन, राष्ट्रियकरण तथा राज्य नियन्त्रित समाजवादी आर्थिक प्रणालीका रुपमा सीमित गरी गलत ढंगले प्रस्तुत गर्ने काम ग¥यो र अन्ततः त्यो आफैमा अन्तर्निहित कमजोरीका कारण समेतले समाप्त भयो । हामीेले निर्माण गर्ने समाजवाद त्यसबाट शिक्षा लिँदै आजको युगका विशेषताहरु समाविष्ट भएको उन्नत समाजवाद हुनेछ । अबको समाजवादमा लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यासलाई कुण्ठित हुन दिइने छैन, बरु सुनिश्चित गरिनेछ ।”
त्यो समाजवाद “नवउदारवादी पुँजीवादको एउटा अंगका रुपमा” “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” होइन । साथै त्यो “सोभियत मोडेलको समाजवाद” पनि होइन । अनि के हो त ? उनीहरुको भनाइमा त्यो आजका युगका विशेषता समाविष्ट भएको उन्नत समाजवाद हो । यहाँनेर गहिरिएर ध्यान दिनुपर्ने चार वटा कुरा छन् । पहिलो, वैज्ञानिक समाजवादलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट अलग्याउने एउटा सारभूत तत्व भनेको सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व हो । यदि उनीहरुले चाहेको “उन्नत समाजवाद”मा त्यो सारतत्व छैन भने त्यस प्रकारको समाजवाद नवउदारवादी पुँजीवादको एउटा अंगको रुपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दा के कति आधारमा भिन्न रहेको छ त ? यसबारे उनीहरुको दस्तावेज मौन छ । दोस्रो, जब “उनीहरु संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको” भनेर भ्रम पैदा गर्दछन्, त्यो बेला उनीहरुले कल्पना गरेको उन्नत समाजवाद अन्तर्गत त्यस संविधानमा सहमत नेका लगायतका दलहरुको प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि पर्ने कुरा प्रष्ट छ । तेस्रो, उनीहरुले प्रतिवेदनमा सोभियत मोडेलको समाजवादलाई “एकदलीय राज्य प्रणाली र निजी सम्पत्तिको औपचारिक उन्मूलन, राष्ट्रियकरण तथा राज्य नियन्त्रित समाजवादी आर्थिक प्रणालीका रुपमा रुपमा सीमित गरी गलत ढंगले प्रस्तुत” भएको भनेर विरोध गर्दछन् । चौथो, उनीहरु भन्दछन्– “समाजवादमा लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यासलाई कुण्ठित हुन दिइने छैन, बरु सुनिश्चित गरिनेछ ।” यसरी हेर्दा त्यहाँ एकातिर निर्वर्गीय लोकतन्त्र वा जनवाद वा अमूर्त, विशुद्ध जनवादलाई सुनिश्चित गरिने कुरा बताइएको छ भने अर्कोतिर अन्य समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादका बीच अन्तर गर्ने मूल तत्व– “सर्वहारा अधिनायकत्व”लाई पूरै लत्याइएको छ । यहाँ कुरा त निकै घुमाएर गरिएको छ, तर सारमा उनीहरुले भन्ने गरेको उन्नत समाजवाद नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादभन्दा तात्विक रुपमा भिन्न देखिदैन । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवादी राज्यसत्ता र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको जगमा उभिएर र सर्वहारा अधिनायकत्वलाई परित्याग गरेर वैज्ञानिक समाजवादको प्राप्ति पूर्णतः असम्भव छ ।
अनि पार्टीको तात्कालिक मूल कार्यदिशा र कार्यभार के हो त ? उनीहरुको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “संविधानको कार्यान्वयन र विकास, शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् सरकार निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको रक्षा, समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको सफल प्रयोग, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माण नै हाम्रो मूल राजनीतिक कार्यनीति हो । यो मूल राजनीतिक कार्यनीति तत्कालै फेरबदल हुने सामान्य कार्यनीति होइन ।” यहाँ एकातिर पश्चगामी संविधानको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको छ भने अर्कोतिर बल प्रयोगको सार्वभौम सिद्धान्तलाई निषेध गरी शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा बताइएको छ । यहाँ विशेष उल्लेखनीय कुरा के छ भने उनीहरुले यो मूल कार्यदिशा, कार्यभार अर्थात् मूल राजनीतिक कार्यनीतिलाई तत्कालै फेरबदल नहुने बताएका छन् । यी भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनीहरु न त जनताको जनवादको पक्षमा छन्, न त वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा नै । यसरी हेर्दा उनीहरुले प्रयोग गर्ने “जनताको जनवाद” तथा “समाजवाद” निवर्गीय, विशुद्ध, संसदवादी जनवाद तथा पश्चगामी समाजवाद बाहेक अरु केही होइनन् । यी सबै कुराका आधारमा के स्पष्ट हुन्छ भने उनीहरुले भन्ने गरेको जनताको जनवाद वा समाजवाद विशुद्ध संसदवादी लोकतन्त्र भन्दा अरु केही होइन । विषयको सारतत्वलाई तार्किक कलाबाजीले जति छोप्न खोजे पनि कदापि छोप्न सकिदैन ।
द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका अनुसार हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासबाट कैयौं महत्वपूर्ण पाठहरु सिक्न सक्तछौं र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि ती पाठहरुको विशेष महत्व छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासबाट हामीले
चौथो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास द्वन्द्ववादले भरपुर रहेको छ । यो इतिहास गति र परिवर्तन, गतिको बक्रता र जटिलता, ठुलोको सानो र सानोको ठुलोमा परिवर्तन सहित अनेकौं आरोह—अवरोहका बीचबाट विकसित हुँदै आएको छ । यस क्रममा कैयौं क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एउटा खास समयमा संशोधनवादीहरूको भ्रमजालमा फसे पनि अर्काे खास समयमा क्रन्तिकारी धारामा एकताबद्घ हुने गरेका पनि छन् । तसर्थ, सच्चा कम्युनिस्टहरु जतिसुकै अप्ठेरा, जटिल र संगीन परिस्थितिमा पनि निराश, हताश र चिन्तित हुनु हुँदैन । माक्र्सवाद र संशोधनवादका बीचको संघर्ष समाजमा विद्यमान वर्गसंघर्ष जस्तै दीर्घकालीन हुन्छ । सच्चा माक्र्सवादीहरु यस प्रकारको दीर्घकालीन संघर्षका लागि तयार भएर बस्नु पर्दछ ।
क्रान्तिलाई सफल तुल्याउनका लागि प्रतिक्रियावादका विरुद्ध संघर्ष चलाउनु मात्र पर्याप्त हुन्न, अपितु प्रतिक्रियावादको रक्षाकवच बनेर प्रस्तुत हुने अवसरवादका विरुद्ध पनि दृढतापूर्वक वैचारिक संघर्ष चलाउन आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, हामीले प्रतिक्रियावाद र अवसरवादसँग जुध्दै क्रान्ति र मुक्तिको सपनालाई साकार तुल्याउनका लागि निम्न विषयहरुमा विशेष ध्यानदिन आवश्यक छ :